Shiinaha SUN-800D Soosaarayaasha Ultrasound iyo alaabada | Sunbright
Lambarka Moodalka SUN-800D
Nooca Ultrasound Iibinta kulul, Qalabka La-qaadan karo Xiinka Ultrasonic
Batariga sii wad in ka badan 3 saacadood
Dekedaha USB 2 dekedaha USB, isku xirnaanta USB flash iyo laser printer
Takhasus guud, OB / GYN, vascular, cardiology, kaadi, xubno yar, iwm.
Habka sawirka 2D, gacanta bilaashka ah ee 3D
Image / video forma AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, DICOM
TGC 8-qaybta TGC, hagaajinta saxda ah ee faa'iidada dhow / fog
Wareegga Cine 512 Frame (Gawaarida / Buugga)
Daabace Madbacado kastaa waa caadi
Luuqado badan Ingiriis, Shiine, Isbaanish, Boortaqiis, Faransiis
Cabirka hal xirmo: 26X49X49 cm
Miisaanka guud ee keli ah: 12.500 kg
Nooca Xidhmada: Baakadka u-qalma xirxirida / Hawo u-qalma oo loogu talagalay Soo iibinta Hot Ultrasound
Tirada (Units) 1 - 5 > 5
Ku iibinta kulul Laptobka qiimaha baare Xiinka qiimaha ultrasound Sun-800D
Sunbright waxay ku faaneysaa inay ku dhawaaqdo nidaamyadeeda cusub ee laptops-ka cabirkoodu cusub yahay, oo ka duwan 2D, 3D, madow & caddaan, midab Doppler, iwm. Ganacsatada maxalliga ah si diiran ayaa loogu soo dhoweynayaa inay Sunbright ka hubiyaan qaybinta ASAP.
Isku duub sida kombiyuutarka laptop-ka caadiga ah, Sun-800D 3D nidaamka ultrasoundwaxay ku dhex jirtaa injineernimada ugu dambeysa ee biomedical iyo farsamooyinka sawirada ultrasonic, bixinta tayada muuqaalka ugu fiican, waxqabadka caafimaad ee muuqda iyo kala duwanaanta, shaqeynta casharrada ku habboon ee adeegsadaha, awood u lahaanshaha fudud, iyo wixii ka dambeeya. Xaqiiqdii waa gacanta midig ee xirfadlayaasha ultrasound meel kasta, wakhti kasta.
Miisaankiisu ka yar yahay 5 kgs, si raaxo leh u qaado oo u soco.
Bateriga lagu dhex-dhisay, waqtiga shaqada in ka badan 3 saacadood, oo lagu fidinayo barta daryeelka meelaha laga heli karo ilaha korantada.
Ma aha oo kaliya nidaam ultrasound xirfad leh, sidoo kale wuxuu noqon karaa kombiyuutar laptop ah marka la codsado.
15 inch bandhigay LED, sida ugu weyn ee xagal daawashada 175 degree.
8-qaybta TGC, hagaajinta saxda ah ee faa'iidada dhow / fog.
2 dekedaha USB, isku xirnaanta USB flash iyo laser printer
Dekedda Discom 3.0, iswaafajinta kaydka, PACS ama u adeegta
Dekedda borojektar, waa waajib in muxaadaro ama tababar
Noocyada baaritaanka: convex, micro-convex, endo-godka / malawadka, toosan, mugga
Takhasuska: guud, OB / GYN, xididada dhiigga, wadnaha, kaadi, xubnaha yar yar, iwm.
Habka muujinta; B, 2B, 4B, B / M, M
Habka sawir-qaadista: 2D, gacanta bilaashka ah ee 3D
Qaabka muuqaalka / muuqaalka: AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, DICOM
3.5MHz R60 / R50 baaritaan xaddidan; dhowr jeer soo noqnoqda laga bilaabo 2.0MHz illaa 5.0MHz
7.5MHz L40 baaritaan toosan; dhowr jeer inta udhaxeysa 5.0MHz ilaa 10.0MHz
6.5MHz R10 / R13 baaritaanka transvaginal; dhowr jeer inta udhaxeysa 5.0MHz ilaa 8.0MHz
3.5MHz R20 baaritaanka wadnaha; dhowr jeer soo noqnoqda laga bilaabo 2.0MHz illaa 5.0MHz
Baadhitaan isdabajoog ah oo isdaba joog ah laga bilaabo 2.0 illaa 12.0Mhz, 4 iskaanka dhowr jeer
Kala duwanaansho firfircoon
≥100dB, 4 talaabo oo shaqada lagu badalayo
Teknolojiyadaha wax lagu sawiro
isku xirnaanta qaabka la xakamayn karo, saxitaanka Gamma, hagaajinta cirifka, jilicsanaanta sawirka, sawir qaadista, hagaajinta faa'iidada otomaatiga, kor / hoos, bidix / midig iyo wadahadal madow / caddaan.
weyneynta stepless, firfircoon-waqtiga dhabta ah PIP hawlaha zoom maxalliga ah
512 jir auto / gacanta loox cine; shaashado badan oo loo yaqaan 'loop loop' (4B, 9B); otomaatiga / buug gacmeedka loo yaqaan 'cine loop' ee hoosta nidaamka B / M iyo M.
Nidaamka maaraynta sawirka
shaqooyinka xamaamaynta, daalacashada, isbarbardhiga, keydinta, daabacaadda iyo wareejinta sawirrada; sida boqolaal kun oo sawiro ah iyo kumanaan loop cine ayaa la badbaadin karaa; sawirada la keydiyay waxaa ku shaqeyn kara shaashad-shaashad buuxda iyadoo loo marayo habka looxanka.
Cabbiraad iyo xisaab
ku cabbiro wareegga iyo aagga masaafada ama habka ellipse; ku cabbiraan wareegga iyo aagga habka wadada; cabir aagga dusha sare ee jirka iyo mugga habka ellipse. 4 ulaha cabirka; qiyaasta cabirka; Qiyaasta 'stenosis ratio', saamiga stenosis area, cabirka xagalka. Dhammaan xisaabintu waa otomaatig.
Ka caawi qalabka
hagaha daloolka, jaantuska, sawirka qaybta
Maareynta maareynta interface
waqtiga dhabta ah ee taageerada khadka tooska ah iyo nidaamka nadiifinta maraakiibta, sawirka horay loo dejiyay iyo shaqooyinka hal-furaha ah.
Qalabka cabbiraadda otomaatiga ah ee OB., Gyn., Xubnaha yaryar, wadnaha, kaadi mareenka iyo kuwa kale
Gyn .: dhexroorka ilmogaleenka, dhumucda intima, colum ugxansidaha, follicle ugxan sidaha ah, dhererka dhuunta ilmagaleenka dhexroor dheer, ilmo galeenka.
Xubnaha yaryar: qanjirka 'thyroid', isku-laabashada sinta.
Wadnaha: AOD, LAD, IVSTd, LVIDd, AA, LAD / AOD, LVPWd, LVIDs, EF, EF SLP, CA / CE, MVCF, CO, CI, LVMWI, AVSV, FS, ACV, ET, SV, SI, LVMW, QMV .
Urolojiga: hadhay sambalka kaadida, qanjirka 'prostate', PSAD.
Nidaamyada keydinta macluumaadka kiisaska bukaanka. Dhamaan xogta waa la keydin karaa, la baari karaa lana maamuli karaa.
Noocyo badan oo OB ah. warbixinnada cabbiraadda, fasalada jireed ee uurjiifka iyo warbixinnada iyo qalooca koritaanka uurjiifka.
Dekeddo qaraabo qaraabo ah
VGA, S-Video, dekedda fiidiyaha TV-ga
Dekedda USB2.0, kaarka keydinta 2G
Dekedda network RJ-45
Noocyo badan oo hababka badbaadinta ah dhammaantood waa la taageeraa, oo ay ku jiraan disk jilicsan, disk adag, disk disk, kaarka CF, kaarka SD iyo kuwa kale.
La jaan qaada daabacaadda diyaaradaha, mashiinka leysarka, daabacaha fiidiyowga iyo duubista fiidiyowga
Nidaamka hore u dejinta ee loogu talagalay baaritaanka iyo qaaciidooyinka qaaciddada Qaaciidooyin kala duwan ayaa loo dejin karaa iyadoo loo eegayo jinsiyadaha kala duwan.
Hore: SUN-906C Midab Doppler
Xiga: SUN-808F Ultrasound
Bamka faleebada Hospira Horyaalka iibinta ugu sareeya ee ...